Ulinganisa njani umgama kwiNyanga usebenzisa iTrigonometry
Enye yezona zicelo zokuqala ze-trigonometry yayikukulinganisa umgama ongenakufikelela kuwo, njengemigama eya kwiiplanethi okanye enyangeni okanye kwiindawo ezikwelinye icala lehlabathi. Cinga ngalo mzekelo ulandelayo.
Umahluko phakathi kwe-copd kunye ne-emphysema
Ubukhulu benyanga bumalunga neekhilomitha ezingama-2,160. Xa inyanga igcwele, umntu obona inyanga emhlabeni ulinganisa i-angle ye-0.56 degrees ukusuka kwelinye icala lenyanga ukuya kwelinye.
Ukufumanisa ukuba ikude kangakanani inyanga emhlabeni, cinga ngesangqa nomhlaba osembindini kunye nesazinge esihamba kanye embindini wenyanga, ecaleni kwenye yeedayimitha zenyanga. Inyanga ikude kangangokuba isangqa esithe nkqo kunye nejika elincinci lesangqa esikhulu sesilinganiselo ngokulinganayo.
I-arc ehamba ngobubanzi benyanga ine-engile ye-0.56 degrees kunye nobude be-arc ye-2,160 yeekhilomitha (ubukhulu). Sebenzisa ifomula yobude be-arc, sombulula irediyo yesangqa esikhulu, kuba irediyasi ngumgama oya enyangeni. Ukusombulula irediyasi:
Kuqala, tshintsha iidigri eziyi-0.56 ziye kwii-radians.
- Faka amanani kwifom yobude be-arc,
njani benadryl ndingayinika inja yam
Faka iirandi ezingama-0.00977 ngomlinganiso we-radian kunye no-2,160 kubude be-arc: 2,160 = 0.00977 x r .
Yahlula icala ngalinye nge-0.00977.
Umgama oya enyangeni ngu
I-cheratussin ac isiraphu vs i-promethazine ene-codeine
doxycycl hyc ikepusi 100mg
isoftball inobunzima obungakanani
ukunitha ukujoyina kumjikelo
ungayitshintsha njani iradiyetha